Nametraka taratasy fangataham-pamelana izy ireo: naverin-dry zalahy ilay lakolosy nangalariny efa ho herintaona | NewsMada
Tena niova fo sa tsy nahita mpividy ? Naverin’ireo mpangalatra omaly vao maraina ny lakolosin’ny fiangonana iray ao Morombe faritra Atsimo Andrefana, very efa ho herintaona lasa izay. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, olona teo an-tanàna ihany no nahita ilay lakolosy ka rehefa nojerena dia hita fa ilay lakolosin’ny fiangonana iray ao an-toerana efa very herintaona lasa izay ity nisy namerina ity. Tsy vitan’izay fa nandefa taratasy fifonana sy fangataham-bavaka avy amin’ireo mpino ao amin’ny fiangonana nangalaran’izy ireo ilay lakolosy ireo mpangalatra. Nataon’izy ireo tao anatin’ilay lakolosy ilay taratasy fifonana. “Indro ny fananan’ny Tompontsika averina Aminy ary aoka anie ny Tompo homba anay. Hitanay fa tsy mety ny nataonay ka izay no nahatonga izao fanatitra (ilay lakolosy io) izao ka mivavaha ho anay mpanota”, hoy ny soratra nampiarahin’ireo mpangalatra tamin’ilay lakolosy.
Nahazo vahana ny halatra lakolosy tany amin’ny faritra Morombe Toliara tamin’ny taon-dasa. Lasibatr’ireo mpangalatra tamin’izany ny lakosolosin’ny fiangonana Katolika. Lasa nirona tany amin’ny lakolosy indray ny ankamaroan’ireo dahalo ka somary nihena ny halatr’omby. “Efa nibebaka tamin’ny Tompontsika izahay, nefa mangataka vavaka aminareo koa. Manaiky eo anatrehan’ny Tompo izahay fa tsy hamerina intsony”, hoy hatrany ny soratra nataon’ireo mpangalatra ao anatin’ilay taratasy fifonana.
Somary nilamindamina indray ny halatra lakolosy tato anatin’ny volana vitsivitsy izay. Efa nanaovan’ny fivondronamben’ny Eveka antso avo rahateo tamin’ny tompon’andraikitra mba hijery akaiky ity raharaha halatra lakolosy ity.